Matsiatra Ambony : Nivoaka tamin’ny fahanginana ny Depioten’i Vohibato, Colonel Martin
samedi, 11 mars 2017 12:27
Député Col Martin - RANDRIANATOAVINA Jean Martin
Tao anaty hetsika fanasoavana ifotony izay efa fanaony telo taona mialoha ny fifidianana solombavambahoaka no naneho hevitra ny Depiote Randrianatoavina Jean Martin na Colonel Martin.
“Fandotoana ahy”, hoy ny tenany ireo endrikendrika sy fanambarana diso nataon’ny Ben’ny Tanàna ao Alakamisy Itenina momba ny tsy fanatrehany ny fandalovan’ny filoham-pirenena tany amin’ny Distrika iadidiany.
“Tsy nahazo fanasàna na nantsoina na pi-maso kely fotsiny aza aho tamin’io fikarakarana goavana io”, hoy ihany izy. Ambaran’i Colonel Martin fa nahilika izy ary tsy avy aminy velively ny tsy fanotronana ny filoham-pirenena izay tonga tany an-toerana andro vitsivitsy izay.
Namafisiny tao anaty kabary nandritra ny hetsika fambolen-kazo ny heviny hentitra momba ireo dahalo tratra ambodiomby izay manao ny asa ratsy. Ary notsindriany tamin’ny Fokonolona fa tsy fitsaram-bahoaka velively no tononony fa fiarovan-tena manoloana ny tranga misy any an-toerana.
Izany dia mamaly mivantana ny hafatra fampatsiahivana ny fandriampahalemana nataon’ny filoha lefitry ny Antenimirandoholona nandritra io lanonana ara-panjakana tao Alakamisy Itenina io.
Mamerina ny firaisankina sy firaisan-tsaina amin’ny mponina ao Vohibato i Colonel Martin toy ny efa antso avo nataony hatramin’izay.
“Hihaona amin’ny filoham-pirenena ny tenako”, hoy izy mba hamahàna ny tsy fifankazahoan-kevitra sy hamantarana ny marina momba ireo olona maniraka ny fanasoketana azy.